Rosiana Mpijirika No Tao Ambadiky Ny Fanapahana Herinaratra Tao Okraina, Hoy Ireo Mpikaroka · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 11 Janoary 2016 4:54 GMT
Nahatonga ireo olom-pirenena an'arivony ao Okraina Andrefana tsy manana jiro ny fanafihana fisovohana tamin'ny Desambra. Sary avy amin'i Juanedc tao amin'ny Flickr, CC BY 2.0.
Nilaza tamin'ny Gazetiboky Infosecurity ny ekipan'ny fikarohana momba ny fiarovana an-tserasera iSIGHT Partners fa ny fikambanan'ny Rosiana mpijirika fantatra amin'ny hoe Ekipa Kakampasika no nahavita izany.
Nanome tsiny an'i Rosia ihany koa ny sampam-piarovam-panjakana ao Okraina noho ny fahatapahan-jiro tao amin'ny faritra andrefana Ivano-Frankivsk ao Okraina tamin'ny 23 Desambra izay nihatra tamin'ireo olom-pirenena 80.000 teo ho eo. Tamin'izany fotoana izany, nitatitra ny orinasan'ny herinaratra iray ao an-toerana, PrykarpattyaOblenergo fa tapaka jiro nandritra ny enina ora mahery tao amin'ny ampahan'ny faritra iasany, anisan'izany renivohi-paritra Ivano-Frankivsk noho ny “fifanindriana” tao amin'ny rafi-panaraha-mason'ny orinasany. Tsy naneho hevitra manoloana ny fiampangana ny manam-pahefana Rosiana hatramin'izao.
Manome tsiny ny Ekipa Kakampasika na Sandworm Team (avy amin'ilay andian-tantara mitohy hai-famoronana “Dune”) ihany koa ireo manam-pahaizana ao amin'ny iSIGHT noho ny fanadihadiana nataon'izy ireo tamin'ny rindrambaiko mpisompatra fantatra amin'ny anarana hoe BlackEnergy 3 sy KillDisk, izay nampiasaina tamin'ny fanafihana. Rindrambaiko mpisompatra fampiasan'ireo vondrona mifandray amin'i Rosia ny BlackEnergy , ary ny fanaraha-maso natao dia nampiseho fa niasa ny BlackEnergy nohavaozina nandritra ny taon-dasa tao Okraina , samy niharan'izany avokoa ny fitondram-panjakana, ny sehatry ny angovo sy ny fifandraisandavitra. Voalaza fa nampiasaina tamin'ny fanafihana mandravarava ny media Okrainiana nandritra ny fifidianana farany ihany koa ny BlackEnergy.
Noheverina fa ambadiky ny fanafihana tsy nitera-doza tao Etazonia sy Eoropa ny vondrona mpijirika Rosiana tany am-boalohany, izay nokendrena indrindra nanaovana fitsikilovana, satria tsy nisy ny fahatapahan-jiro na fahasimbana hita vatana tamin'izany fanafihana izany.
“Mihevitra ny ISight fa Rosiana ny hetsika tamin'ny voalohany ary ny fidirana an-tsokosoko nataon'izy ireo tao amin'ny rafitra SCADA tao Etazonia sy Eoropa dia fijerena lalana hanaovana ny fanafihana,” hoy ny solontenan'ny iSIGHT tamin'ny Gazetiboky Infosecurity.
Nilaza tamin'ny Reuters ny talen'ny famotopotorana ara-pitsikilovana ao amin'ny ISIGHT fa tsy fantatra mazava raha niasa mivantana ho an'ny governemanta Rosiana ny Ekipa Kakampasika na Sandworm Team na tsia. “Mpisehatra Rosiana miasa ho amin'ny tombontsoam-panjakana io,” hoy i Hultquist. “Tsy fantatray na mahaleotena izy na tsia.”